Ra’iisul Wasaarahaa Somalia oo sharci daro ku tilmaamey Madaxweyneyaasha Jubbaland looga dhawaaqey (Dhageysi) – idalenews.com
Ra’iisul Wasaarahaa Somalia oo sharci daro ku tilmaamey Madaxweyneyaasha Jubbaland looga dhawaaqey (Dhageysi)
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa mar kale ka hadlay arrimaha ka taagan Jubooyinka iyo siyaasada dowladda ka leedahay.
Mr Saacid ayaa sheegay in sheegay in dowladda ay horay siyaasad cad ugu qeexday arrimaha Jubooyinka, isagoo xusay in shan arrimood uu uga degnaa oo ku saabsanaa barnaamijka xukuumada ee maamul u sameynta.
“Waxaa qabnaa wax kasta oo la sameynayo inay yihiin wax dadka u dhan yahay oo aanay u kala badneyn, Xukuumada ayaa leh hogaanka arrimahaas”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid oo intaa ku daray in wax aanay waafaqsaneyn dastuurka aanay aqbali doonin.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in dadka Jubooyinka ay u soo wadaan wax daawo ah, isla markaana ay iimaankooda kula degaan, ayna is xasiliyaan sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in dowladda ay ka leedahay Jubaland Road Map cad oo qeexaya sidii maamul raali laga wada yahay loo sameyn lahaa, taasoo uu xusay in rabitaanka dadka uu ku imaanayo.
“Road Map cad ayaa dadka ula imaaneyna sida wax la yeelayo gudaha ayaa ka fiirineyna, waxaa ku gacan siineynaa shaqada dhaceysa oo gudaha ka jirta iyo dadka maamulada ee heerarka kala duwan mas’uul kama nihin wax dadka jecel yahay baan maamuleynaa”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa sheegay in war murtiyeedkii ka soo baxay IGAD uu taageerayo shanta qodob ee dowladda dejisay, taasoo ay ku xuseen in IGAD ay door ku lahaato arrimaha maamul u sameynta, isla markaana caalamka soo dhoweeyay.
Shir madaxeedkii IGAD ee lagu soo gaba gabeeyay Addis Ababa ayaa laga soo saaray war murtiyeed ka kooban dhowr qodob oo mid ka mid ah uu ahaa in shirweyne qaran oo dib u heshiisiin lagu qabto Muqdisho, kaasoo bulshada ku nool Jubooyinka iyo Gedo loo qabanayo.
Xaalada siyaasadeed ee ka taagan magaalada Kismaayo ayaa ah mid murugsan, tan iyo markii bartamihii bishan lagu doortay Madaxweynayaal dhowr ah oo iska soo horjeeda, iyadoo dowladda Soomaaliya ka soo horjeesatay.
Daawo: Axmed Madoobe oo Shaanshada Skpye kaga qeybgaley taageerayaashiisa Xaflad Minneapolis ka dhacdey Xaley
Daawo: Wafdi uu hogaaminaayo Wasiirka Gaashaandhiga oo weli ku sugan airport Kismaayo loona diidey inay gudaha u galaan magaalada